Imiklomelo yeLotto Engafunwanga | Ukunqoba KweLotto Okungafunwanga
Ikhaya / Imihlahlandlela / imiklomelo ye-lotto engafunwanga
Imiklomelo ye-Lotto Engafunwanga
Ukuwina i-Lotto mhlawumbe kungelinye lamaphupho avame kakhulu kubantu emhlabeni wonke. Ngokunikwa leli qiniso, kuyamangaza kepha kuliqiniso ukuthi inqwaba yemiphumela ye-lottery ihlala ingafunwanga. Kunabantu abaningi abathenga amathikithi e-lottery awinayo futhi abazi ukuthi bazuze imali eshisiwe! Okunye ukuwina okungafunwanga kuncane kepha kube khona ukuwina okuningi kwe-jackpot nakho okungafunwanga.
Masonto onke e-United Kingdom cishe amaphawundi ayizigidi ezi-2 ekuwinweni kwe-lottery ahlala engafunwanga. Emhlabeni jikelele inani lemali yelotho elingaphezulu kakhulu alifunangwa ngabaphumelele.
Bheka Isiqondisi (Directory) Sethu Se-Lotto Esiku-Inthanethi.
Yiziphi izizathu zokuwina ezingafunwanga?
1. Eminye imidlalo (njengama scratch card) kunzima kakhulu kwabanye abadlali ukubona ukuthi bawinile.
2. Abadlali ababheki mathupha amathikithi abo ukuthi bawine yini ngoba bathembele komabhalane basesitolo abaphethe ama-terminals. Uma i-terminal inephutha noma umabhalane engasebenzisi imishini ngendlela efanele, ukuwina kuka ngaziwa.
3. Abaphumelele bamane bakhohlwe ukubheka amathikithi abo e-lotto ukuthi bawinile yini.
4. Kwesinye isikhathi abadlali bagcina belahlekelwe ngamathikithi abo.
Kwenzekani kumiklomelo engafunwanga?
Ama-lotto amaningi anesikhathi sokubanga ama-winnings akho. Ngemuva kwalesi sikhathi izimali bese zibuyiselwa enhlanganweni yelotho noma kuhulumeni wamazwe osebenzisa izimali njengoba kudingeka. Abanye bavele babuyele emiklomelweni ngenkathi abanye bechithwa ezinkingeni zokusiza ezifana nezibhedlela, ukunakekelwa kwezempilo noma imali yokufunda. Amazwe ahlukene azoba nemithetho eyehlukene yokubhekana nezimali ze-lottery ezingafunwanga. Nge-South African National LOTTO ne-SportStake, abadlali banezinsuku ezifika ku-365 kusukela ngosuku lwe-draw ukuze bafake izicelo.
Ophumelele esimeni esinjalo esibi ukuba ngumuntu ohlulekile nge-lottery. Umqondo wokuthi izigidi zamaRandi, amaPhawundi, ama-Euro noma amaDola alahlekile cishe awubekezeleleki. Umcabango wokuthi ithikithi lokuwina liphonswe ngaphandle ngephutha noma lilele alilandeleleki ephaketheni lejazi noma ekhoneni lendlu kuyadumaza kakhulu. Ngabe ikhona indlela yokuthi abantu bafune ama-lottery abo ngaphandle kwezinkinga?
Ukuwina noku landa ukuwina kwakho kwe-Lotto
Ama-lotto aku-inthanethi anenketho ephephe kakhulu yokufuna ukuwina kwakho. Uma ubamba iqhaza kwi-lottery eku inthanethi izinyathelo ziqonde kakhulu futhi une-akhawunti ebhalisiwe egcinwayo. Ukuwina okuncane kungaguqulwa kudlalwe amakhredithi ukukunikeza amathuba amaningi wokuwina amanani amakhulu. Ngenye indlela, noma yimaphi amanani wokuwina angakhokhwa ngqo kuma-akhawunti asebhange omdlali.
Imiyalo inikezwa abadlali ngokucacile futhi baziswa nge-imeyili yemiphumela nezinombolo eziwinayo. Abadlali banemiphumela ethunyelwe kubo futhi bayakwazi ukubheka ama-winnings abo kusukela ekunethezekile lekhaya labo. Ngakho-ke kuhlakaniphile ngabanethemba le-lottery ukuthi badlale ama-lotto abo abawathandayo ku-inthanethi njengoba bekwazi ukuzama inhlanhla yabo futhi bafune ukuwina kwabo ngendlela elula futhi enobuchwepheshe.